प्रधानमन्त्रीज्यू! त्रुटि नक्सामा हो कि, पुस्तकमा? - Himal Dainik
काठमाडौँ ८ आश्विन २०७७, बिहीबार १७:०१
कसरी बर्को उध्रियोयो दैनिक ज्यू ? पुस्तकमा छापिएका तथ्यहरु गलत पर्नु हुँदैन, त्यसलाई सच्याएर यथार्थ रूपमा प्रकाशित गर्नु पर्छ भन्दा राष्ट्रवादी बर्को उध्रिन्छ ? पत्रकारिता गर्नुस् न, शिकारी राजनीति नगर्नुस् । https://t.co/iDozzBT54K
— Ramsharan Bajagain (@BajagainRam) September 23, 2020
अघिल्लोनेपाल–चीन सीमा विवादबारे हतारको सरकारी प्रतिक्रिया युक्तिसंगत छैनः कांग्रेस
पछिल्लोनेपालमा १८ हजार ४३७ जनामा कोरोना सक्रिय